China LEDD500 / 700 Ceiling LED Double Head Chipatara Chiedza Chiedza neEC Zvitupa vagadziri uye vanotengesa | Wanyu
LEDD500 / 700 Ceiling LED Kaviri Musoro Muchipatara Chiedza Chiedza neEC Certification
LEDD500 / 700 inoreva mbiri dome LED chipatara chechiedza chechiedza.
Chipatara chekurapa mwenje dzimba dzakagadzirwa nealuminium alloy ine gobvu realuminium ndiro mukati, izvo zvinobatsira kwazvo pakupisa kupisa. Girobhu racho igirobhu reOSRAM, yero uye chena. Iyo LCD inobata skrini inogona kugadzirisa kujekesa, tembiricha tembiricha uye CRI, ese ayo anogadziriswa mumatanho gumi. Ruoko runotenderera runotora isingaremi ruoko rwealuminium yekumira chaiko. Pane zvitatu zvingasarudzika zvemaoko echirimo, ayo akakodzera kumakamuri ekushandisa ane akasiyana mabhajeti. Iwe unogona zvakare kukwidziridza madziro ekudzora, backup bhatiri system, yakavakirwa-mukati kamera uye kuongorora.
■ kuvhiyiwa mudumbu / kwese
■ kuvhiyiwa mwoyo / tsinga / thoracia
■ traumatology / emergency kana
1. Kujekesa Kwakadzika
Chiedza chekurapa muchipatara chine kuora kwechiedza kweanosvika 90% pazasi pebasa rekuvhiya, saka mwenje wakakwirira unodiwa kuti uve nemwenje wakatsiga. Ichi chechipiri dome chipatara chekurapa mwenje inogona kupa inosvika zana nemakumi matanhatu emwenje uye kusvika ku1400mm kujekesa kudzika.
2. Yakanaka Shadow Yemahara Performance
Zvakasiyana nevamwe vagadziri vanotenga maorenisi akareruka, isu tinoisa mari yakawanda kukudziridza yakasarudzika lenzi ine iri nani condensing performance. Yakaparadzaniswa ma LED mabhuru ane ayo lens, gadzira yayo yakajeka munda. Iko kupindirana kweakasiyana mwenje danda kunoita kuti mwenje nzvimbo iwedzere yunifomu uye zvakanyanya kudzikisa mwero wemumvuri.
3. Mushandisi-anoshamwaridzika LCD Kubata Screen Screen Panel
Iyo tembiricha tembiricha, mwenje kusimba uye neruvara kupa indekisi yechipatara chipatara mwenje inogona kuchinjwa zvakaenderana kuburikidza neLCD control panel.
4. Kufambisa Kwemahara
Iyo 360 yepasi rose mubatanidzwa inobvumidza chipatara chemwenje mwenje wechiremba kutenderera zvakasununguka kutenderedza ekisero yayo, uye inopa rusununguko rukuru rwekufamba uye sarudzo dzisina kumiswa dzekumira mumakamuri epasi
5. Inonyatso kuzivikanwa Brand Kuchinja Magetsi
Pane mhando mbiri dzemagetsi edu ekuchinja, kunze kweavo vakajairika, kushanda kwakadzikama mukati meiyo AC110V-250V. Kune nzvimbo dzine magetsi akanyanyisa kusagadzikana, isu tinopa rakakura-magetsi switching magetsi emagetsi ine yakasimba anti-yekukanganisa kugona.
6. Gadzirira Kushandiswa Kwemangwana
Kana iwe uchida kukwidziridza kune kamera kamera mune ramangwana, iwe unogona kutizivisa pamberi, uye isu tichaita gadziriro yekumisikidza pamberi. Mune ramangwana, iwe unongoda mubati ine yakavakirwa-mukati kamera.
7. Zvingakudetsera zvishongedzo Sarudzo
Iyo inogona kuve yakagadzirirwa neyakavakirwa-mukati kamera uye kuongorora, madziro egomo control panel, kure kure uye bhatiri back up system.
Kujekesa Kusimba (lux)
Ruvara Kupisa (K)
Ruvara Rendering Index (Ra)
Pisa kune Chiedza Ratio (mW / m² · lux)
Kujekesa Kudzika (mm)
Dhayamita yeChiedza Spot (mm)
Akatungamirira Quantities (yori)
Akatungamirira Service Life (h)
> Zviuru makumi mashanu
Pashure: LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Inoshanda Chiedza neWall Kudzora
Zvadaro: DL500 Halogen Inobviswa Lamp yekuvhiya paMavhiri
LEDD620620 Ceiling akatungamirira Dual Dome Medical Opera ...
LED L500 Hot Kutengesa LED Rechargeable Nhare Operat ...
LEDB730 Wall Kuisa LED OT Lamp ine Articula ...
Akatungamirira Wall Wall vakatasva Type Medical Examinati ...
LED D500 Ceiling-yakakwira LED Imwe Dome Operati ...
LEDB260 akatungamirira Operating Examination Lamp Wall Typ ...